Paul's 2nd Letter to Timothy – 2trondro
Home / Baiboly / Epistily / Paul's 2nd Letter to Timothy
1:1 Paul, Apostolin'i Jesosy Kristy noho ny sitrapon'Andriamanitra, araka ny teny fikasana ny amin'ny fiainana izay ao amin'i Kristy Jesosy,
1:2 ho an'i Timoty, zanaka malala indrindra. Grace, famindram-po, fandriampahalemana, avy amin'Andriamanitra Ray sy Kristy Jesosy Tompontsika.
1:3 Misaotra an'Andriamanitra, Izay tompoin'ny, toy ny nataon'ny razako, amin'ny fieritreretana madio. Fa tsy manam-pitsaharana mihazona ny fahatsiarovana anareo amin'ny fivavahako, andro aman'alina,
1:4 trano ta-hahita anao, mitadidy ny ranomaso mba ho feno fifaliana,
1:5 miantso an-tsaina ny finoana, izay ao aminareo tsy mihatsaravelatsihy, izay nonina tany aloha ny renibenao, Lois, ary ao ny reninao, Eunice, ary koa, Azoko antoka, ao aminao.
1:6 Noho io, Manainga anareo aho mba hamelombelona ny fahasoavan'Andriamanitra, izay ao aminareo ny fametrahan-tanako.
1:7 Fa Andriamanitra tsy nanome antsika toe-tsaina ny tahotra, fa ny hatsaran-toetra, ary ny fitiavana, ary ny fifehezan-tena.
1:8 Ary noho izany, aza menatra ny ho vavolombelon'ny Tompontsika, na ahy, mpifatony. Fa tsy, miara-miasa amin'ny Filazantsara, araka ny herim-panahy avy amin'Andriamanitra,
1:9 izay Nanafaka antsika sy niantso antsika tamin'ny fiantsoana masina, tsy araka ny asantsika, fa araka ny fikasany sy ny fahasoavany, izay nomena antsika tao amin'i Kristy Jesosy, talohan'ny taonjato rehetra amin'ny fotoana.
1:10 Ary izany no voaseho ankehitriny noho ny fahazavana ny Mpamonjy antsika i Jesoa Kristy, izay tokoa no nandrava ny fahafatesana, ary izay ihany koa ny fiainana sy ny tsi-fahalòvana nanazava ny alalan 'ny Filazantsara.
1:11 Avy amin'ity Filazantsara ity, Izaho no nanendrena ahy ho mpitory, ary Apôstôly, ary mpampianatra ny Jentilisa.
1:12 Izany no antony, Izaho koa niaritra izany. Fa tsy resin-kenatra aho. Satria fantatro izay inoako, ary Azoko antoka fa manana ny hery hiarovana ny zava-nankinina tamiko, amin 'izany andro izany.
1:13 Tazony ny karazana teny tsy misy kilema izay efa renao tamiko ao amin'ny finoana ny ny fitiavana ao amin'i Kristy Jesosy.
1:14 Tandremo ny tsara nomena anao amin'ny alalan'ny Fanahy Masina, Izay velona ao amintsika.
1:15 Fantaro ity: fa izay rehetra any Asia efa nahafoy ahy, izay isan'ireny, Phigellus sy Hermogena.
1:16 Enga anie ny Tompo mamindrà fo anie ny ankohonan'i Onesiforosy, satria namelombelona ahy matetika, ary efa tsy menatra ny gadra.
1:17 Fa tsy, rehefa tonga tany Roma, hazoto nitady ahy izy ka nahita ahy.
1:18 Enga anie ny Tompo anie hampahita azy famindram-po mba hahazoana avy amin'ny Tompo amin'izay andro izay. Ary fantatrareo tsara ny fomba fomba maro efa nanompo ahy tany Efesosy.
2:1 Ary ny aminareo, ny zanako lahy, hahazo hery avy amin'ny fahasoavana izay ao amin'i Kristy Jesosy,
2:2 ary ny zavatra izay efa renao tamiko tamin'ny alalan'ny vavolombelona maro. Izany zavatra izany dia mampirisika ny olona tsy nivadika, dia iza indray no ho mety mampianatra ny sasany kosa.
2:3 Asa toy ny miaramila tsaran'i Kristy Jesosy.
2:4 tsy misy olona, manao toy ny miaramila an'Andriamanitra, mamatopatotra-tena ao amin'ny tontolo ity raharaha, ka mba ho mampifaly azy, fa efa efa voaporofo ny tenany.
2:5 Avy eo, koa, na iza na iza miezaka amin'ny fifaninanana dia tsy hahazo satroboninahitra, raha tsy efa nifaninana ny lalàna.
2:6 Ny mpamboly izay mikely tokony ho voalohany handray anjara amin'ny vokatra.
2:7 Hahatakatra izay aho nanao hoe:. Fa Jehovah hanome anareo fahazavan-tsaina amin'ny zavatra rehetra.
2:8 Aoka ianao hahatsiaro fa ny Tompo Jesoa Kristy, izay ny taranak'i Davida, efa nitsangana indray tamin'ny maty, araka ny filazantsarako.
2:9 Aho no hanasa-ity Filazantsara, na dia nofatorana rojo vy toy ny mpanao ratsy. Fa ny Tenin'Andriamanitra dia tsy mba voafatotra.
2:10 No iaretako ny zavatra rehetra noho izany antony: noho ny olom-boafidy, ka dia, koa, Mety hahazo ny famonjena izay ao amin'i Kristy Jesosy, amin'ny voninahitra any an-danitra.
2:11 Izany Mahatoky izao teny izao: fa raha miara-maty aminy, isika, dia hiara-belona aminy koa.
2:12 Raha mijaly, isika, dia hiara-manjaka aminy. Raha mandà Azy isika, izy koa handà antsika.
2:13 Raha izay mahadiso, dia mbola mahatoky: dia tsy afaka ny handà ny tenany.
2:14 Mikiry ireo zavatra ireo, nanambara anoloan 'ny Tompo. Aza tia ady ny teny, fa izany no mahasoa na inona na inona afa-tsy ny mitady hanongam-panjakana ny mpihaino.
2:15 Aoka ianao ho eo amin'ny asa sy mieritreritra ny fanolorana ny tenanao eo anatrehan 'Andriamanitra ho toy ny voaporofo sy unashamed mpiasa izay efa nandamina ny teny fahamarinana araka ny tokony ho.
2:16 Fa tsy manaja ny masina, na lahateny foana. Fa izany indrindra hampandrosoana ny iray amin'ny impiety.
2:17 Ary ny teniny miparitaka toy ny homamiadana: Anisan'izany ny Hymeneo sy Fileto,
2:18 izay efa lavo niala tamin'ny fahamarinana amin'ny filazana fa ny fitsanganana amin'ny maty dia efa feno. Koa araka izany ny efa nampitanondrika ny finoana ny olona sasany.
2:19 Fa ny fanorenana mafy nataon'Andriamanitra dia mijanona eo, manana izao tombo-kase: ny Tompo mahalala izay tokony ho adidiny, ary izay rehetra mahalala ny anaran'ny Tompo hiala amin'ny ratsy.
2:20 Fa, tao amin'ny trano lehibe, , tsy dia fanaka volamena sy volafotsy, fa koa ireo hazo sy tanimanga; ary azo antoka fa ny sasany dia natao ho fanomezam-boninahitra, nefa ny sasany kosa amin'ny fahafaham-boninahitra.
2:21 raha misy, avy eo, Ho Efa voadionay tenany ho afaka amin'ireny zavatra, dia ho fanaka natao ho fanomezam-boninahitra, efa nohamasinina ka mahasoa ho an'ny Tompo, voavoatra ho amin'ny asa tsara rehetra.
2:22 Koa dia, handositra ny faniriana ny tanora, nefa tena, mikatsaka ny rariny, finoana, manantena, fiantrana, sy ny fiadanana, miaraka amin'ireo miantso ny Tompo amin'ny fo madio.
2:23 Fa halaviro ny fanontaniana adala sy ny tan-dalàna, fa fantatrao fa mamokatra ireo ady.
2:24 Fa ny mpanompon'ny Tompo dia tsy tokony tia ady, nefa kosa tsy maintsy ho malemy fanahy amin'ny olona rehetra, mora ampianarina, marary,
2:25 manitsy miaraka amin'ny fifehezan-tena ireo izay manohitra ny fahamarinana. Fa na oviana na oviana Andriamanitra hanome azy fibebahana, mba hanaiky ny fahamarinana,
2:26 ary avy eo dia mety sitrana avy ny fandriky ny devoly, Izay efa natao ho babo avy tany ny sitrapony.
3:1 Ary fantaro izao: fa amin'ny andro farany mampidi-doza no hitambesatra fotoana akaiky.
3:2 Ny olona ho tia tena, tendan-kanina, tena manandratra, miavonavona, niteny ratsy, tsy mankatò ray aman-dreny, tsy mahay mankasitraka, ratsy fanahy,
3:3 tsy pitiavana, tsy misy fiadanana, mpanendrikendrika, unchaste, lozabe, tsy misy hatsaram-panahy,
3:4 mpamadika, Sahisahy ratsy, tena zava-dehibe, tia fahafinaretana mihoatra noho ny an'Andriamanitra,
3:5 na dia manana ny endriky ny toe raha nanda ny hatsaran-toetra. Ary noho izany, mialà amin'ireny olona ireny.
3:6 Fa eo ireo dia ireo izay miditra trano; ento, toy ny babo, ny vehivavy adala vesaran'ny ota, izay voatariky ny faniriana maro samihafa alalan'ny,
3:7 mianatra mandrakariva, nefa tsy fanatrarana fahalalana ny marina.
3:8 Ary ao amin 'ny fomba nanoheran'i Jana sy Jambres nanohitra an'i Mosesy, toy izany koa ireo manohitra ny fahamarinana, olona vetaveta saina, olona nolavina avy ao amin'ny finoana.
3:9 Anefa izy ireo tsy handroso mihoatra noho teboka iray. Fa ny fahadalan'ny ny farany dia haseho amin'ny rehetra, tahaka ny tany aloha.
3:10 Fa efa tanteraka namory ny fotopampianarana, fampianarana, tanjona, finoana, fahari-po, fitiavana, faharetana,
3:11 fanenjehana, fahoriana; zavatra toy ny nanjo ahy tany Antiokia, tany Ikonioma, ary tany Lystra; Niaritra ny fanenjehana ny fomba, ny Tompo sy ny fomba ary mamonjy ahy amin'ny zava-drehetra.
3:12 Ary ireo rehetra izay miaina ny toe-tsitrapo ao amin'i Kristy Jesosy, dia henjehina.
3:13 Fa ny ratsy fanahy sy ny mpamitaka dia handroso amin'ny ratsy, nanao fahadisoana ka naniraka ho diso.
3:14 Na izany aza tena, dia tokony hitoetra ao ireo zavatra izay nianaranao sy izay efa nankinina taminao. Fa fantatrareo avy izay nianaranao azy ireo.
3:15 Ary, avy amin'ny zazakely, ianao dia efa nahalala ny Soratra Masina, izay nampahahendry anao ho amin'ny famonjena hampianatra, ny alalan 'ny finoana izay ao amin'i Kristy Jesosy.
3:16 Ny Soratra Masina, satria efa ara-tsindrimandry avy amin'Andriamanitra, mahasoa koa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ary ho fitaizana amin'ny fahamarinana,
3:17 ka ny lehilahin'Andriamanitra mba ho tanteraka, rehefa voaofana ho amin'ny asa tsara rehetra.
4:1 Mijoro ho vavolombelona aho eo anatrehan'Andriamanitra, ary eo anatrehan'i Jesosy Kristy, Izay hitsara ny velona sy ny maty, amin'ny alalan'ny ny fiverenany sy ny fanjakany:
4:2 fa tokony hitory ny teny maika dia maika, amin'ny fotoana sy amin'ny fotoana: hananatra, miangavy, mafy, amin'ny faharetana rehetra sy ny fampianarana.
4:3 Fa hisy ny fotoana dia tsy hiaritra fampianarana tsy misy kilema, fa raha tokony, araka ny faniriany, ireo dia hanangona ny tenany mpampianatra, amin'ny mangidihidy sofina,
4:4 ary azo antoka fa, hampiala anatrehany miala amin'ny fahamarinana, ary izy ireo dia ho tafintohina amin'ny anganongano.
4:5 Fa ny aminareo, tena, ho mailo, mikely aina amin'ny zavatra rehetra. Ataovy ny asan'ny evanjelista, fanatanterahana ny asa fanompoana. Asehoy ny fifehezan-tena.
4:6 Fa izaho dia efa ho tonta hiala, ary ny andro ny faharavan'ny mamotsitra akaiky.
4:7 Efa niady ny ady tsara. Efa nahavita ny Mazava ho azy fa. Efa nitsimbina ny finoana.
4:8 Ary ny amin'ny sisa, ny satroboninahitry ny fahamarinana efa natokana ho ahy, iray ny Tompo izay, ny marina mpitsara, hamaly amiko amin'izany andro izany, ary tsy ho ahy ihany, fa koa ho an 'ireo izay miandrandra ny fiverenany. Maika hiverina amiko ela.
4:9 Fa Demasy efa nandao ahy, noho ny fitiavana ho an'ity taona, ary efa lasa Tesalonika.
4:10 Kreska nankany Galatia; Titosy nankany Dalmatia.
4:11 Lioka ihany no ato amiko. Alao Marka, ka ento miaraka aminao; fa mahasoa ahy amin'ny fanompoana.
4:12 Tykiko dia nirahiko ho any Efesosy.
4:13 Rehefa miverina, ento miaraka aminao ny vatsy izay navelako tany Troasy tao amin'i Karpo, ary ny boky, indrindra fa ireo boky hoditra.
4:14 Aleksandro, mpanefy varahina nampiseho ratsy ahy be loatra; ny Tompo no hamaly azy araka ny asany.
4:15 Ary ianao koa dia tokony hisoroka azy; fa efa mafy nanohitra ny teny.
4:16 Tamin'ny voalohany ny fiarovana, tsy misy olona nitsangana teo anilako, fa nandao ahy ny olona rehetra. Enga anie tsy ho isan'ny hamely azy!
4:17 Kanefa ny Tompo nitsangana teo anilako ka nampahery ahy, ka amin'ny ataoko ny fitorian-dia ho tanteraka, ary toy izany koa izay rehetra te hihaino ny hafa firenena. Ary aho afaka am-bavan'ny liona.
4:18 Ny Tompo dia nanafaka ahy amin'ny asa ratsy rehetra, ary Izy no hanatanteraka ny famonjena amin'ny fanjakany any an-danitra. Ho Azy anie ny voninahitra mandrakizay mandrakizay. Amen.
4:19 veloma amin'i Prisila, sy Akoila, ary ny ankohonan'i Onesiforosy.
4:20 Erasto nitoetra tany Korinto. Ary Trofimo nilaozako tany Mileto, satria narary.
4:21 Maika ho tonga alohan'ny ririnina. Eubulus, sy Poda, sy Lino, ary Claudia, ary ny rahalahy rehetra manao veloma anareo.
4:22 Enga anie ny Tompo Jesoa Kristy Ho amin'ny fanahinareo. Enga anie aminareo anie ny fahasoavana. Amen.